iOS 9.1, nhoroondo yeiyo iOS 9 yaifanira kunge iri uye yakanga isiri | IPhone nhau
iOS 9.1, nhoroondo yeiyo iOS 9 yaifanira kunge iri uye yakanga isipo
Sevazhinji venyu munoziva, isu tatova mune yechishanu beta yeIOS 9.1 uye manzwiro haagone kuve nani. Kune akawanda maficha akagadzirwazve, kwete kuvandudzwa, muIOS 9.1. Zvino ndipo apo mazwi aTim Cook akatanga kuita zvine musoro paakavimbisa kuti iOS 9 ichave kufambira mberi kukuru maererano nekugadzirisa uye kutenderera, izvo isu tese takanga takamirira panguva yekutanga kweIOS 9, uye nezvakakonzera mune yakakura vazhinji vevashandisi musanganiswa wakakwana pakati pekusagutsikana uye kuora mwoyo. Ini ndiri wekutanga kutsoropodza iOS 9, iri pachena kugadzirwa kweiyo iOS 8 uye iyo mascara yakamhanya zvine mutsindo neIOS 9.0.1 uye iOS 9.0.2, zvisinei uye mushure meyedzo yakati wandei neIOS 9.1 handinyari kutaura izvozvo iOS 9.1 ndizvo zvaifanira kuve iOS 9 uye zvaive zvisiri.
1 Kushandiswa ndicho chiratidzo chekutanga chekugadzirisa
2 Ndiani akati lag? Kukura kwemifananidzo
3 Inokurumidza uye "nenjere" kutaridzika
4 Zvimwe zvakasiyanasiyana nzombe
Kushandiswa ndicho chiratidzo chekutanga chekugadzirisa
Iyo bhatiri pasina mubvunzo ndiyo yega Hardware mune yedu smartphone iyo isingawanzo kukunda rumbidzo yedu. Vazhinji vaive avo vakadzungudza misoro yavo pavakaona kuti Apple yakadzora zvishoma kugona kwebhatiri Mune yavo nyowani iPhone 6s uye iPhone 6s Plus zvishandiso, zvisinei, Apple veterans vaiziva kuti kana vakazviita, zvaive zvechimwe chinhu, kashoma kubva Cupertino vanosiya chimwe chinhu mukana, kana kuita zvisina maturo zvehukuru hwakadaro. Kubva kuApple ivo vainyatsoziva zvavaive nazvo mubhedhuru, uye icho chinhu chiri iOS 9.1.
iOS 9.1 inogadzira yakasarudzika bhatiri kunwa, chishandiso hachiwanzo kudzikisa mashandiro ayo anoratidza pakati pe8 ne9 maawa ekushandisa uye mashoma maawa makumi maviri ekuzorora. Hongu, vamwe vedu vakawana zvinyorwa zvakafanana neIOS 20, kunyangwe neIOS 9, asi tiri kutaura nezvekushandiswa kwebasa nguva dzose, neshanduko mukuvhara, kufona, maemail, kubhurawuza nekuchinja pakati pe 8G ne3G kubatana. Kuti bhatiri rinogara kwenguva yakareba neIOS 9.1 (5) hachisi chakavanzika, chero munhu akambozviedza anoziva.
Ndiani akati lag? Kukura kwemifananidzo
Iwo majee ekuvhara paanotora Spotlight, iyo keyboard inoita kunge inopindura millisecond mushure medu, iyo kuvhura iyo inotyaira vamwe vanopenga ... Ngatimbomira kunyora, iOS 9 yakaunza nhau, ndizvozvo, yakatakurwa neshanduko yakaita kuti vadikani vacheme iOS 6 .
iOS 9.1 (5) inotaura zvakanaka kune ese aya hutsinye, iwo mamopikisi akawedzeredzwa zvishoma. Pasina mubvunzo Apple yakamhanyisa mifananidzo yacho chimwe chinhu, nekuti inogona, nekuti inozviziva izvozvo neIOS 9.1 mudziyo uchapindura. Kumhanyisa mifananidzo kunowanzo kuratidza kunyadziswa kwako, asi Apple yakasimba mukutenda uku, uye ine iOS 9.1 (5) yainayo.
Inokurumidza uye "nenjere" kutaridzika
Tinobvumirana kuti iyo Spotlight yakavandudzwa zvakanyanya neIOS 9, zvisinei, yanga isiri nguva shoma yekuti iwe wakamirira mhedzisiro isina kusvika, iwe wakanyora uye iyo skrini haina kuratidza chero chinhu zvachose. Nekudaro iOS 9.1 yakapa kumwe kukurudzira kudiki kune iyo Kutarisa, kunoshanda pakumhanya kwakanyanya, inoratidza mhedzisiro yakanaka, chero iwe uri. Kunyangwe iine zvakawanda zvine chekuita neizvi kuti kunyorera kwakagadziridzwa kwaro kwemazuva.
Zvimwe zvakasiyanasiyana nzombe
Ngativei vechokwadi chaizvo, kune vazhinji venyu, billet iyo yandakangonyora ndichikuudzai nezve mabhenefiti asingaverengeki eIOS 9.1 haina basa newe padiki, zvese zvauri kuda kugona kucheka maoko kumurume anonakidza pa basa mumapoka ako eWhatsApp, uye hongu, neIOS 9.1 iwe unogona zvakare. Huwandu hwakawanda hweemojis nyowani wandisingazombonzwisise kuti sei vanga vasiri kare, vasvika paIOS. Iwe unozogona kucheka maoko, isa Mecca, emoji kuti iwe uri kurwara uye kunyangwe, uye wadii, nyati. Ehe, unicorn. Kana chero mumwe wenyu achiziva kuti inguvai chaiyo yekuisa emoji yeunicorn, ndokumbira undizivise mubhokisi remashoko.
Hatizive chaizvo kuti nei Apple yakafunga kuvhura iOS 9, vhezheni iri pachena isina kukwana, isina kugadziridzwa uye yakaipa, zvisinei, zvinoita sekunge kumhanyisa kwekutanga kweiyo iPhone 6 kunogona. Nekudaro, ivo vanga vachiratidzira pamwe nekukurumidza kukurumidza kweiyo iOS 9.1 kuti ivo vaive vakaronga kuzvivandudza, uye ndozvazviri.
Ini handisi kuzokurudzira chero munhu kuti aise beta vhezheni yeIOS firmware, ndoda iye zvino kwasara mavhiki maviri kuti iOS 9.1 isunungurwe zviri pamutemo uye zvine mutsindo kune ese maIOS, asi ndinofanira kutaura kuti iOS 9.1 ine zvakandishamisa, sezvo pasina vhezheni yeIOS yakamboita kubva iOS 6. Saka pakupedzisira Tim Cook anotipa izvo zvaakativimbisa, kuwirirana chaiko pakati pehardware nesoftware yaagara achizvikudza, iOS 9 iri pano uye ndeyekugara .
Kana iwe parizvino urikushandisa beta 5 yeIOS 9.1, usazeze kutitaurira mubhokisi rehomwe kuti zvaunofunga ndezvipi, zvingave zvinowirirana nezvakaratidzwa pano, ndizvo zvatiri. Uye zvakare, nenzira iyi tinogona kusiyanisa maonero evashandisi mavhiki maviri chete mushure mekuburitswa kwayo zviri pamutemo. Muchidimbu, ndinofunga kuti iOS 9.1 ichafadza vazhinji, kunyanya avo vane zvishandiso pamberi peiyo iPhone 6, vanozoona mashandiro achimutsiridza zvishoma, matiri kurangarira, ndiyo vhezheni yeIOS iyo mimwe michina ichafukidza nyaya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » iOS 9.1, nhoroondo yeiyo iOS 9 yaifanira kunge iri uye yakanga isipo
Zvakanaka, chokwadi ndechekuti, ios 9.1 beta 5 inopa kunogonesa kushandiswa, kuyerera uye kugadzikana. Ini ndinowanzo kuve ndinodzvinyirira neiyo iPhone uye ndinotamba uye ini ndinofamba nenzira yakawanda nayo, kunyangwe zvakadaro, sekutaura kwechinyorwa, kashoma kuenda pazasi pe8-9hrs yekushandisa.
Ndiri parizvino paIos 9.0.2 nekuda kweiyo jailbreak (yakanyanya kudikanwa kwandiri), asi ndinonyatsoda kuyedza ios 9.1 gm.
Ini ndakabvisa iyo jailbreak uye ini ndakaisa kuna 9.1 beta 5 chave chinhu chakanakisa chandakaita kubvira iOS 8 uye 9, inomhanya zvinoshamisa ...... ini handidi iyo jailbreak, kuita, bhatiri uye fluidity hongu, gare gare ichabuda for 9.1.
Ichokwadi kuti iOS 9.1 beta 5 yakavandudzika kana ichienzaniswa neshanduro 9.0.2 asi ini ndine iyo iPhone 5S uye ndinoramba ndichicherekedza lag pandinopeta nemaSystem uye neWhatsApp zvakafanana ... iOS 9 haisati yandikurudzira uye ini kuzvidemba kuti ndakasiya iOS 8.4 ...
rodrigo alonso akadaro
Hazvigamuchirwe kuti Apple mushure mekukundikana kwakanyanya neiyo ios 8 inozviitazve neios 9 uye io 9.01 uye 9.02 dzakashata zvakanyanya ivo vanovhara maapps akavharwa, zvinonyadzisa chaizvo kuApple vanoenda kubva pakuipa kuenda pakuipa mazuva ese vanoodza mwoyo zvakanyanya
Pindura kuna rodrigo alonso
Ndakayambira pakati pevandinoziva avo vane yavo Iphone: sezvavanokundikana zvakare neIOS 9.1 zvakaitika kumakwikwi. Zvakanaka kuti vanotiseka.
Nemakwikwi ini ndinofunga iwe unoreva Android, nekuti ini pachokwadi ndinosarudza iyo yakaipa kwazvo vhezheni yeIOS chiuru pane yakanakisa vhezheni yeApple. 4S yangu payakatyoka ndakachinjira kuApple uye zvakatora zvisingasviki gore kuti ndidzoke nditenge iPhone
Ndine iOS 9.1 uye idambudziko !! Bhatiri rinondirambira zvishoma nezvishoma, kana ndisina iyo yekuchengetedza modhi yakavhurwa haina kusvika masikati, uye ine akawanda lags uye yakarembera kumusoro kazhinji uye zvinotora nguva kupindura zvakare, kunyadziswa zvachose ... iPhone 6
Zvitengere iwe iPhone 6s. iOS 9 yakagadzirirwa foni iyo, kwete yako.
Fer, kana iOS 9 yakangogadzirirwa chimwe chinhu, nei ivo vasingayambire kuti zvimwe zvishandiso hazvivandudzwe ???
Pane yangu iPad 2 zvakakosha, zvisinei pane yangu iPhone 6 iri kuita mushe. Ndagara ndanzwa kuti pavanokutumira iwe yekuvandudza inofanirwa kuitwa ... Asi zviri kuitika neIOS 9 pane mamwe madhizaini zvinoita kunge chitsotsi kwandiri.
Ndiri kufunga zvakanyanya nezve KUSATENGA MAC ...
Apple, ndinonzwa kubvarurwa !!!
Apple, tipe mhinduro yedambudziko iri, kune vazhinji vedu vari kutsikisa !!
Wakambonzwa here kuti iwe unofanirwa kugadzirisa? Pffffe the they
HAPANA asi izvo hazvifanirwe KUDZIDZISWA !! Icho chirevo chemakomputa sainzi: Kana ichishanda, USABATA!
Ndine iphone yangu neiyo yekutanga ios uye ndiri kufara kwazvo. Uye handife ndakagadzirisa, EVER !!
Hapana nyaya yekubatira kuna Fer, Mauro. Dzorerazve zvese kubva pakutanga uye iwe uchaona kuti zvinoenda sepfuti. Ndine iPhone 5s ine beta5 uye inoshanda chaizvo.
Pamwe rimwe zuva iwe unozodzidza kuti "pamusoro pezvose" zvakanyorwa zvakasiyana.
Kunze kwekunge iwe uchireva jasi, hongu ...
Inouraya, inouraya uye inouraya pane yangu iPad, pane iyo iPhone inoshanda kwazvo, ini handinzwisise chero chinhu, ndinosuwa iOS 8.
Game Center ichiri kufa, maficha anonyangarika, Safari yakaipa ... Ini ndakatsamwira Apple, ndanga ndichienda kunotenga Mac asi ndichafunga nezvazvo.
Ndine beta 5 ye9.1 yakaiswa uye chokwadi ndechekuti chaizvo zvandinonyunyuta pamusoro pazvo ndezvekushandisa bhatiri, ndanga ndichiverenga kuti zviri kukonzerwa neazvino Facebook kugadziridza asi kunyangwe uchitevera matipi ekuderedza dambudziko iri zvinoramba zvichidhura ini zvakawanda pakupedzisira tichaona.
Iyi irondedzero yakaipa, ndinofarira kuziva zvakawanda pamusoro pekuvandudzwa uye nemabasa matsva, kuyemura chinhu hachina musoro, ndinoshandisa tekinoroji, hazvindishandise kuti ndive muranda wevanoshuva.
Kune rinotevera, chikamu pamusoro pechigadzirwa chingave chinonyanya kubatsira kupfuura Apple fan maonero, nhau uye mashandisiro emashandisirwo matsva kushandisa icho
ZVESE zvitsva zvinhu zviri chaizvo uye zvakanyatsotsanangurwa. Kupfuura chero chinhu nekuti hapana imwe kunze kweEmojis. Iyo optimization yeIOS 9 kwete vhezheni itsva. Kugadzira kutsoropodza kunovaka kazhinji kunoda kuverengerwa uye kunyatsoverenga zvinyorwa.
Kutenda nekuverenga uye nezvezvakanakisa.
Ndinoda kuziva kana zvese izvi optimization uye fluidity zvinoonekwa mune zvekare zvishandiso. Zvakanaka kwazvo kutaura kuti mune iPhone 5s uye 6 zvese zviri kufamba zvakanaka, zvingave zvichishayikwa zvimwe.
Asi ini, semuridzi weiyo iPad 3, ine 1 Gb yegondohwe, ndinogona kutaura kuti iOS 9 marara, kuti yakatonyanya kupfuura iOS 8, uye kuti yakaipa zvakanyanya sezvinobvira pane iyo iPad 3. Zvakanaka , Ndaifanira kudzoka kubva kuIOS 9 kuenda kuIos8 nekuti iyo yekupedzisira yaive nani ... Nonsense.
Ini handidi kufungidzira kuti iOS 9 ichaenda sei pane iyo iPad 2, kana iPhone 4S, zvishandiso zvine mwero, kana iyo iPad 3 ine simba rakanyanya ikaenda zvisizvo. Izvo zvakanyanya kuomarara kuita zvakafanana asi zvakawedzeredzwa uye zvine mvura? Chinhu chakanaka chavanogadzira nekuvandudza software yeiyo chaiyo Hardware!
Ini handizive kuti iOS 9.1 ichaenda sei pane iyo iPad 3, kana iPad 2, asi ini handitarisire chero chinhu chakanaka, kwete kunyange nekukurumidza kupfuura iOS 8.
David kuti wakarurama sei, ndine iPad 2 uye iOS 9 inokosha.Hauzive kuti zvinondiremera kuti ndiivandudze. Unogona kundiudza kuti wakadzokera sei kuIOS 8 kuti ndaienda kumamovie ???
Pane yangu iPad 4 iyo iine Apple A6X inotyisa, zvakare yakasviba uye mashandiro akavhara ega, ndakagara kwenguva yakareba neIOS 8.4 uye ndakagadziriswa nekuda kwenhau dzandakanga ndatova Jailbroken yeIOS 9, asi zvave chisarudzo chakaipisisa chehupenyu hwangu, kugadzirisa.
Iwe wakarurama sei, zvakakosha. Kwayedzwa iOS 9.1 beta 5 pane iPad 3 uye chitsotsi, kana iwe ukavhura application unoona kumbomira kukuru, kunyangwe mune maficha seyakareruka sekarenda, asi ndeipi joke iyi?
Zvino pane iyo iPhone 5S kana iPhone 6 iwe haufunge kuti inoshamisira futi, nekuti unoona kudzikira uchienzaniswa neIOS 8, uye pane iyo iPhone ini ndakave nenguva yekudzikisira, ndatenda kunaka.
Uye usaseke Android kana, ndine shamwari neApple uye nharembozha dzinokurumidza kupfuura iyo iPhone 5S ine iOS 9 ... saka ndokumbirawo, ngative vashandisi kwete vateveri, Apple haisisiri zvayaimboita, yega yega yakaipa kupfuura yapfuura maererano nekuyerera nekuita, mune izvo zvinotaurwa naApple kuratidza, asi inhema, iOS 6 ndiyo yaive yekupedzisira sisitimu ine optimization yechokwadi.
Apple inotibvarura… zvinonyadzisa.
Nzvimbo dzepedyo nemazano ari kuratidzwa muSpotlight zvekare?
Zvakaipisisa kupfuura Samsung nekambani, ikozvino Apple inoita kuti iwe uvandudze gore rega rega, nekuti makwikwi anogona kusadzokorora michina yavo, asi vari kufamba zvakanaka, avo vanobva chaiko cupertino vacharova mudziyo wako
Hongu, asi zvakanyatsoita, yangu iPad 3 ine makore ayo, kunyangwe mashoma, asi maererano ne Hardware ichiri sezuva rekutanga, tsitsi ndeyekuti iOS 9 yakaiparadza, kusvika padanho rekushandisa senge khalenda uye se ivo cherekedza KUSVIRA mabhegi kubva kune iyo yekupedzisira-pecked iyo system iri.
Chinhu chakanyanya kushata chavakamanikidza kuti uvandudze, nekuti kana iwe uchizomboda kudzorera chero chikonzero, iwe unogona chete kuisa yazvino vhezheni, kuti uparadze chishandiso chako uye utenge chekupedzisira pasina chaicho chinodiwa.
Ndiri kureva, izvozvi ndinotenga iyo iPad Air 2 uye ndinoita sei neiyo yazvino iPad iri yakanaka? Kandira kure? Ndiri kuitengesa ne € 100 uye kubiridzira mutengi? Ah hongu, Apple ine chirongwa chayo chekushandisa zvakare kuitira kuti vagone kutarisira zvikamu zvako uye kudzikisa mutengo weiyo iPad nyowani, mukana wechokwadi… weApple hongu, kune mutengi iri SCAM.
Wese munhu anoziva kuti Apple inogadzira iOS yeiyo chaiyo Hardware, kunyanya kune imwe ine 2gb yegondohwe, kubva kuIOS 9 ivo vachange vari kuronga vachifunga nezve 2gb yegondohwe, iyo kubva ku6s pasi uye yavo yega ipad ine 1gb yegondohwe havana , iOS haipfure zvakanaka, ndinoti izvi senge dzidziso, asi mukuita zvakajairika kuti Hardware ine 2gb yegondohwe ichaona musiyano wakawanda neavo vane hafu, uye ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei ndakatenga iPhone 6 uye ini ndakamirira iyo 6s, iyo yandinofanira kutenga, ini parizvino ndinoshandisa iyo iPhone 4, iyo pane zvayo ini handigone kunyunyuta, sezvo ini ndisingakwanise kuikumbira kuti ive yakawandisa ine musimboti uye 512 wegondohwe makore mashanu apfuura, kunyangwe zvakadaro nehunhu uhwu uchapwanya. Kwaziso
Pindura kuna Lukas
Lukas, ini ndinonzwisisa kuti iOS 9 inogadzirwa yakanangana ne iPhone 6S, asi ipapo izvo:
1) usanyepe uye utaure kuti inovandudza mashandiro mune zvese.
2) kuti ivo varegedze iwe uderedze kune zvekare zvishandiso nguva dzese uye havamanikidze iwe kuti uvandudze kuitira kudzoreredzwa.
Izvo hazvisi zvekugunun'una nekuti iyo nyowani nyowani inoenda zvisirizvo pane zvigadzirwa zvekare, ndezvekunyunyuta nekuti hazvikurege uchidzokera kumashure, uye kana ukazviwana mumazuva mashoma achiri kusaina iyo yekare iOS, nekukurumidza kana gare gare ivo vanomanikidza iwe kuti uvandudze, nekuti hauzive kuti iwe unodikanwa riini kudhonza kudzoreredzwa, uye kuti Apple inoita izvi kwauri zvinonyadzisa.
Kunemi mese munogunun'una nezvedambudziko remvura pa iPhone, ndinokukokai kuti mushandire kuApple, (musakanganwa kuisa chinouraya basa) 4 GB ye RAM = lag shoma, 3 GB ye RAM = mbichana mbichana. (paunenge uchitamba mitambo ine yakakwira graphic zvemukati, kana paine akawanda mashandiro akavhurwa uye kana apisa), 2 GB ye RAM lages zvakanyanyisa, kunze kwekunge uine Nexus kana Motorola. 1 GB ye RAM mu = Android = zvirinani handitombo kukuudza. Ndiyo foni yakanaka sekuru.
Ini ndinotaura izvi kubva pane zvakaitika, ndine Chinyorwa 5 - 4GB RAM, LG G3 - 3GB, uye HTC Chido - 2GB ye RAM uye inosemesa "lag" irimo mune ese avo.
Ini ndiri mushandisi we iPhone kubva 3GS uye parizvino ndine iyo 6 ine IOS 9.02 uye inofamba mushe, ehe, ndakaita kuiswa kwakachena kweIOS 9, kutanga kugadzira backup mu iTunes. Chinhu chisingaitwe nevazhinji uye vanopedzisira vadhonza "bugs"
Pindura kuna Antifanboys
Unonyepa uchiziva. Nicki yako inopesana newe.
Zvakanaka, ndinayo mu4S, ndiri kuita nemazvo, iyo yega app inotora nguva kuvhura iFacebook, bhatiri irikuitawo futi, kunyangwe zvangu risiri iro zera
Nharembozha nekuti ini ndakaichinja neshanduro 8, asi ini ndinogona kugara rinenge zuva rese ndisina kuchinjazve, chimwe chinhu chisina kuitika kwandiri zvisati zvaitika Zvisinei, kwandiri zviri nani pane vhezheni 8. Vane 9 havana kana kupa mukana wekuishandisa, enda kubeta kamwechete
Uye pamusoro, ndinofara ...
Kuverenga izvi kunondipa hunyoro. Asi chii naivety, Mwari wangu.
Ini ndakapa yangu iPad 3 gore rapfuura, ndisati ndazvirovera kumucheto kwetafura, pavaka "kusimudzira" kuIOS 8.
Ramba uchifunga kuti
-Updates inofanira kunatsiridza iyo system;
-HASINA MO ZVAKAWANDA.
Zvishoma hazvisi zvimwe.
Ndinoziva Apple inotaura neimwe nzira, asi usavatende ...
iOS9 pane iPad 2 iri nani kwazvo kupfuura masere pasina kupokana, asi zvirokwazvo izvi paangu iPad, usakanganwe kuti kumisikidzwa kwese inyika yezvingaitika, dzimwe nguva tinogunun'una nezve OS, asi chii chatakaisa uye sei zvinokanganisa nematanho echikwata chedu? Kushandiswa kwakabatana zvakanyanya neyakaiswa software, zvirongwa zvinowedzera uye zvakawanda zvinoda kuziva kuti tiri kupi, chenjera izvi, tarisa marongero emidziyo yako… ..
Ke ase akadaro
Mhoro, urikutamba chii?
Pindura Ke ase
Ngatione yangu iOS 9.1 ndinoifarira, kupfuura chero chinhu kubva pandakaona kuti unogona kutopindura WhatsApp usina kupinda, kana kucheka maoko kana mauto hahaha, chinhu chete chinokundikana ndechekuti dzimwe nguva zvinonetsa kuti ubatanidze neWifi
Mhoroi, kwaziso kubva kuVzla, ndiri 6s plus mushandisi kubva munaGunyana 28 uye ndiri kumhanya beta firmware! Uye iwe wakanyatsotaura nezve 5th beta yeIOS 9.1! Kunyangwe bhatiri racho rinogara neni chikara sezvo ini ndichishandisa iyi foni! Zvino ini ndoda kutaura chimwe chinhu chandingade kuti mumwe munhu andiudze pano kana zvikaitika kwaari, nekuti neiyi 5th beta inoramba ichiitika kwandiri! Uye zvinotevera:
Kana ini ndikavhura avo vanofambidzana, kungave kubva kune vanobatika app kana kubva kufoni app uye ini ndichitsvaga wekubata, ini handitombowana munhu wandinotsvaga wandinotsvaga, uye haundiratidze vafoni vakafanana neaya andinonyora!
Ipapo ndinofanira kudzima zita randiri kutsvaga kupinda mumapoka uye ini ndinongopa OK, ndisingachinje chero chinhu mumapoka! Ini ndinongozvipa ok, ndobva ndadzosera zita ipapo uye kana iko kuonana kuchioneka! Uye zvinoshatirisa uye handizive kuti nei zvichiitika! Ino inguva yekutanga izvi zvaitika kwandiri pane iPhone! Handizive kana chichava chinhu kubva iOS 9.
Ini ndatotumira iko kukanganisa kuApple kubva kuAppbackback app! Pataida kuenda beta 3 yeIOS 9.1! Uye hapana chinoramba chakafanana!
Ndine maICloud mapoka ari mumapoka, inova hurukuro yangu huru, ndine 3 gmail uye imwe hotmail. Ini ndangosarudza iyo iCloud uye imwe ye gmail, muICloud ndidzo shamwari dzangu dzese dzine nhamba dzefoni!
Ehe ndiwo madhiri andinayo, handizive kana paine munhu pano anoziva chero chinhu nezvazvo!
Ini handizive kana zvaunotaura nezve iOS 9.1 ichokwadi, ko kana ndikakuudza kuti mushure mekuve nePad uye ma3 iPods kubva ku iPhone 6 kusvika ku2, handisati ndamboona mudziyo une  madudu abuda mandiri iPhone 6 q kana neIOS 9.01 kana ne9.0.2 hazvina kugadziriswa. Ndinovimba kuti neIOS 9.1 vakagadziriswa.
1. Paunovhura Google, inobuda senge vhoriyamu yakanga yakwidzwa.
2.Iyo chaiyo kana inobatika bhatani yekubatsira kubata dzimwe nguva inoshanda nekupa kamwe uye dzimwe mbiri nguva.
3. Parallax athari kana kudzikisira kufamba, inozvishambadza pachayo uye kunyangwe ukaenda kunodzora yekufambisa bhokisi uye kuimisikidza / kuimisa, haina chainoita, inoshandura foni kunge roketi, iwe unovhura chero application uye inovhura ipapo ipapo sekunge iri yakanga yabatwa, ndinoreva, iyo parallax mhedzisiro, hapana imwe nzira yandinogona kudzoka kunze kwekunge foni yatangwazve. Kana mushure mekuisa iOS 9.1 ikaramba yakafanana, ndichaidzorera sezvayakabva kufekitori, Hardware xq haisi. Ini ndakaita zvigadziriso kuburikidza ne ota.
gadziridza kuna 9.1 beta 5 pa iphone 6 uye zvinoramba zvichindipa iko kukanganisa kwekusandiziva ini chairojaja inongogamuchira tambo dzakajairika uye izvi zvinotora nguva yakareba kurongedza, ndingaitei
Hazviitike here kune chero munhu kuti kana iwe ukaisa alarm alarm hapana nzira yekuidzima usina kuisazve foni? Na 9.0.1 vakaigadzirisa asi ne9.0.2 zvakatadza zvekare uye muna 9.1 zvakafanana.
Pindura kuna Oberonx
Yangu nyaya ndeyekuti ini ndakaisa iOS 9.1 kutanga pane yangu iPad 4 pamberi pa iPhone 6 kuti ndione zvakaitika, uye ndakashamisika zvisingaite nekutsamwa kwenyoro pabhatiri. Hazvindigari kwemaawa gumi AT REST.
Zvinoitika kune mumwe munhu?
IOS 9.1 ndiyo yakanyanya kunaka, ma iphones kazhinji zvokwadi ndidzo dzakanakisa chete kamwe chete pandakatenga iyo android x shandura uyy handina kuodza moyo mumwedzi mishanu ndakatya, nemavhairasi nezvimwewo. 5plus, ini handinzwisise Vanhu vane ma androids xk vane chikonzero chekuvhura miromo yavo votaura zvakaipa nezvePhones.Handizive kana zvisina kukwana kuti vatenge imwe voitumira kuvauraya ,? Vanhu vakapusa pasi rese.
Muchokwadi, kukwidziridzwa ndiko kwakajairika, uye chirevo icho iwe chaunotaura nezve komputa, zvinoratidza kuti iwe hauna kana chekuita nekomputa… Kusavandudza chinhu chinowanzoitika kana iwe uine foni yako kujeri kana kana wajaira kubiridzira…. Kana iwe uchida kuti yako iPhone iratidzike semvura uye ruzivo rwako rwese runowanikwa nyore nyore kune chero munhu ... Zvikasadaro mudziyo une makore asingasviki maviri unodiwa kuti uvandudze ...
Ini ndaivewo nedambudziko rekutaurirana, ndakarigadzirisa nekuisa sarudzo vese vanofambidzana mumapoka
Yangu Iphone 6 ios 9.1 yanga yakaipa kwazvo. Anononoka, uye ari kusaririra zvaasati amboita kare.
Zvinosuruvarisa kuti yega yega yekuvandudza yakaipa kupfuura yekupedzisira.
Ndinovimba ios 9.2 inounza iphone kudzoka kune fluidity yaive pamberi peiyi yazvino kugadzirisa, zvirinani.
Ini ndakauya ndobva kuApple, ndine tarisiro yepamusoro, uye handisi kugutsikana, zvachose, asi iyi vhezheni vhezheni inoita senge kwandiri haina kufanana neApple mukurumbira.
Icho chinhu chimwe chisinga shande kuvandudza yangu iphone 5c ne iOS 9.1 ZVINOTYISA, kana iwe ukasa kunyora izvi mumazuva maviri ndichave ndine hurombo kuve mumwe wevaya vanotenga muMAC
iOS 9.1 KUSVIRA!
Mhoro, gadziridza kusvika 9.1 uye bhatiri rinogara zvishoma, ndichafanirwa kudzoreredza kuti ndidzokere mushanduro yandaive nayo kubva kufekitori sezvo shanduko iri kuoneka.
Cydia inopunzika painopunzika mujeri iOS 9? Edza iyi mhinduro
Samsung kuvhura Galaxy Note 5 ... muRose Goridhe